प्राचिनकालमा हाम्रा पुर्खाहरुको आहार अर्थात भोजन सात्विक र शुद्ध थियो । उनीहरुको विहार अर्थात् दिनचर्या एवं दैनिक जीवन पनि अत्यन्त सरल थियो । त्यही शुद्ध आहार र विहारका कारण उनीहरु स्वस्थ एवं दीर्घजिवी थिए । उनीहरुको कर्म एवं विचार पनि सकारात्मक थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । आधुनिकता तथा भड्किलो जीवनशैलीकाका कारण अहिले मानिसमा विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् ।
आधुनिक मानिसका आहारमा कुनै शुद्धता छैन, खाने कुराहरुमा विषादी मिसिएको छ । उनीहरुको विहार अर्थात जीवनशैली पनि एकनासको छैन । उठ्ने, काम गर्ने, खाने तथा सुत्ने कुरामा कुनै तालमेल छैन । जसरी भए पनि पैसा कमाएर सुखमय जीवन बिताउनु छ । पैसाको लागि उनीहरु जे पनि गर्न तयार छन् । मानिसमा सन्तुष्टि छैन । कर्ममा विश्वास छैन । अरुको मात्र राम्रो देख्ने प्रवृति छ । जसका कारण उनीहरुमा छटपटी, नैराश्यता जस्ता मानसिक समस्या देखिनुका साथै विभिन्न नसर्ने रोगहरुले सताएको पाइन्छ । मिठो र स्वादिलो मानेर खाएका खानेकुराले मानिसलाई गलाइरहेको छ ।
आधुनिक खाना बन्द विष बनेको छ । आहार, विहारमा आएको परिवर्तन कै कारण विश्वमा विभिन्न प्राणघातक रोगहरु देखा परेका छन् । असन्तुलित आहार एवं विहारका कारण मानिसको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति दिनप्रतिदिन क्षीण भइरहेको छ । सानो सानो रोगको जीवाणुसँग प्रतिरोध गर्न नसक्दा मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमानु परेको छ । यस आलेखमा हामीले सेवन गरिरहेका आहार (खाना) कस्तो छ ? हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ ? र आहार तथा विहारले हाम्रो विचारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? जीवनशैलीलाई कसरी सुधार्ने ? आदि विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
त्यस्तै यदि तपाई लक्का जवान पुरुष युवा हुनुहुन्छ । एक दिन सुनसान बाटोमा एउटी राम्री युवती डराई डराई हिडेको देख्नु भयो । यस्तो अबस्थामा तपाईले दुई कुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । एक– जिस्काउने, मनमा कामुक भावना तरंगित गर्ने वा त्यस्तै त्यस्तै ‘। दुई– यी पनि मेरी दिदी, बहिनी वा छोरी जस्तै हुन् । कुनै काम विशेषले हिडेकी होलिन् वा वास्ता नगर्नु । तपाईको पहिलो विचार नकारात्मक हो भने दोश्रो सकारात्मक । तपाईले पहिलो विचार अनुसार कार्य गर्नु भयो भने तपाई पक्कै पनि समस्यामा पर्नु हुन्छ । पहिलो विचारको कारण समाजमा महिला हिँसा, वलात्कार जस्ता जघन्य अपराध घटिरहेको छ ।
अर्कातिर तपाईको आफ्नै मन वा विचार तपाईको बस (नियन्त्रण) मा छैन ।
त्यसैले आजैबाट आफ्नो आहार, विहार तथा विचारलाई परिवर्तन गरौँ । अब हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । जीवनशैलीलाई बदलेर मात्र समाज, राष्ट्र अनि संसारलाई बदल्न सक्छौं ।
‘हामी व्याँस गाउँपालिकाको समग्र विकास अभियानमा छौं’अन्तर्वार्ता/विचार | 2077-Falgun-20
नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको खोजीअन्तर्वार्ता/विचार | 2077-Falgun-20
संसद पुनर्बहाली पछिका खेलअन्तर्वार्ता/विचार | 2077-Falgun-20
'ओलीसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने कुरा सम्भव छैन'अन्तर्वार्ता/विचार | 2077-Falgun-19